समुदायमा कोरोना फैलिएको छैन : मन्त्रालय - EKalopati
समुदायमा कोरोना फैलिएको छैन : मन्त्रालय
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिल्यै समुदायमा गइसकेको भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार पत्रकारहरुसँग भर्चुअल संवाद गर्दै डा. गौतमले भने, ‘समुदायमा कोरोना फैलिएको भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले लुकाएका भनिएको छ तर क्लस्टरमा हो की समुदायमा हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। अहिले वीरगंज, काठमाडौं, सर्लाहीलगायत धेरै केसहरु देखिएको ठाउँमा क्लस्टर केसहरु हुन्।’
डा. गौतमले समुदायमा संक्रमण फैलिएको हो कि होइन पत्ता लगाउन सेरो सर्वेक्षण गर्न लागिएको र उक्त सर्बेक्षणबाट मात्रै समुदायको संक्रमणको अवस्था पत्ता लाग्ने बताए।
साथै मन्त्रालयले यस विषयमा केही कुरा लुकाउन नखोजेको उनले बताए। तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भने समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको बताउँदै आएका छन् यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अध्ययन भइरहेको जनाएको हो।
Previous articleकेन्द्रीय कारागारमा मृत्यु भएका तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next articleमन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू, खतिवडा मन्त्री क्वाटर छाड्ने तयारीमा